Wholesale Anti-Burst Fitness Bhora uye Yoga Bhora reKuekisesaiza, Yoga, Birthing, Gym Workout Manufacture uye Factory |XGEAR
Anti-Burst Fitness Bhora uye Yoga Bhora reKuekisesaiza, Yoga, Kuberekwa, Gym Workout
XGEAR inyanzvi giredhi rekurovedza bhora bhora rinorwisa-kuputika kusimba iro rakanaka kune akasiyana maekisesaizi akadai sePilates, Yoga,balance uye gym kurovedza muviri.Iyo zvakare inotsvedza inodzivirira birthing bhora rekuzvitakura uye kurapwa kwemuviri.
● ZVINHU:Bhora redu rekusimba rekusimba rakagadzirwa nemhando yepamusoro isiri-chepfu PVC, iri premium uye eco-hushamwari.Iyo yoga bhora inotsiga zvinoshamisa, haizobudi kana kukanganisa.
● PAKA PAKA RANDADZO:Iri bhora rekurovedza muviri rinouya nezvose zvaungade.Rondedzero yeZvishandiso inosanganisira: Kuyeresa Tepi, Plug Zvishandiso uye Manual Pump.
● HIGH ANTI-BURST RATING:Bhora rekusimba rakapfuura nemuyedzo wakaomarara unokwanisa kumira kuremerwa.Inopa kupikisa kwakanakisa kuzvinhu zvakapinza saka haizoputike kunge bharumu kana yakaboorwa.
● Zviri nyore kubata nekuda kwezvisizvo zvisingasviki uye anti-slip matte pamusoro pebhora.Pane gwara rekuita riri pamusoro rekuratidza mashandisirwo acho zvakajeka.
●ZVINHU ZVITATU ZVOKUSARUDZA:Kune matatu saizi iripo: 55CM, 65CM, 75CM, Saizi yedu chati inogona kukubatsira iwe kusarudza yakanakisa saizi yemaitiro ekuita maekisesaizi kana secheya yedhesiki, iyo inogona kuenderana neyaunoda kushandisa.
Material Kwete-chepfu PVC
Sarudzo yetatu yehukuru 55CM, 65CM, 75CM
Saizi yebhokisi remukati L2.95" x W1.69" x H4.17"
Uremu hwebhokisi remukati 1.35KG
Carton size L18.11" x W11.22" x H15.75" (8pcs/bhokisi)
MAKASIYANA WEMABASA:Yakanakira kurovedza muviri kwakasiyana-siyana kumba uye gym seYoga & Fitness, Prenatal Health & Desk Chai.
Haisi chete inogona kuwedzera cardio endurance, kuenzanisa uye kushanduka sebhora rekurovedza muviri, asiwo inogona kuwedzera kufema, kutenderera uye mhasuru yepelvic sebhora rekuzvara.Uyezve, inogonawo kushandiswa sechigaro chedhesiki kugadzirisa chimiro uye kudzoreredza kurwadziwa kwemusana.
Zvakapfuura: 600D 4 Bow Bimini Yepamusoro Kavha mune Akasiyana Ruvara ane Matanho eBoat
Zvinotevera: XGEAR Mesh Screen Zippered Wall Panels ye10′ x 10′ Canopy